Topnews:- Dowladda Somalia oo Qatar la safatay iyo sababta ?
Sunday June 11, 2017 - 03:34:09 in Articles by Super Admin
Madaxweynaha iyo Ra'isulwasaaraha Somalia ayaa markii ugu horeeysay si wadajira ula saftay Dowladda Qatar sida ay Waagacusub u sheegeen saraakiil ka hoowlgasha Villa Somalia iyo laba ka mida la taliyeyaasha Farmaajo.
Wafdi uu hogaaminaa Wasiiru dowlaha Arrimaha dibadda Qatar Suldaan Bin Saad ayaa berri ku wajahan Muqdisho si ay ula kulmaan Madaxweyne Farmaajo iyo Ra'isulwasaare Kheyre sida uu Waagacusub u xaqiijiyay Agaasimaha Madaxtooyadda Fahad Yaasiin.
Dowladda Qatar ayaa horey ugu guuleeysatay in Agaasimaha Madaxtooyadda Somalia loo magacaabo Fahad Yaasiin Xaaji Dahir oo ka tirsan Saraakiisha sare ee xiriirka Al-Shabaab u qaabilsan Dowladda Qatar .
Dowladda Saudi Arabia oo ka carootay iney Madaxda Somalia si toosa ula safteen Dowladda Qatar oo lagu eedeeyay iney maalgeliso xagjiriinta iyo argagixisadda Caalamka ayaa todobaadkaan albaabadda ka xiratay Wafdi ka socday Dowladda Somalia oo heer Wasiir iyo Saraakiil Ciidan iskuugu jiray.
"Saudi Arabia markii aan u tagnay inaan kala saxiixano heshiis Mashaariicyo kala duwan waxaa nagu dhacday la yaab kadib markii Boqortooyadda diiday iney nala kulanto ,kadibna waxaan is aragnay Shirkaddo ganacsi” ayuu yiri Wasiir ka tirsan Wafdigga Dowladda ee tegay Riyadh.
Dowladda Qatar waxeey dalaal ka tahay soo saarista Shidaalka Somalia ,sidoo kalena waxeey ku hoowlan tahay iney heshiiso Argagixisadda Al-Shabaab iyo Dowladda Farmaajo waloow la rumeeysan yahay in Ra’isulwasaare Kheyre xilliyo badan taageero dhaqaale siin jiray Al-Shabaab.